Cnc machining iinkonzo, Cnc ngomshini Iintetho, Precision machining - Weldo
I-Dong Guan Weldo Precision Machining Co., Ltd ngumenzi oqinisekisiweyo we-ISO 9001, owasekwa ngo-2008. Indawo yokuvelisa ibekwe kwisixeko esidumileyo somzi-DongGuan. Singabantu abaqeqeshiweyo kwinkonzo ye-NC & CNC kunye nokuhanjiswa kweenkonzo ze-OEM kunye ne-ODM. Iindidi zibandakanya ukujika, ukugaya, ukugaya, ukunyathela, ukugoba, iwelding, ukulahla ukutya, ukubhola kunye nokuchwetheza. Indawo yokuvelisa engaphezulu kwe-6, 000 yeemitha zesikwere isetyenziswa ngokusebenza kakuhle kwemveliso ukuvelisa izinto ezifanelekileyo ezifanelekileyo zeentlobo ezahlukeneyo zamashishini afana ...
UmThengi wethu uhlala e-Asia, eMntla Melika naseYurophu, sizibophezele ekuveliseni nasekuboneleleni ngomgangatho ophezulu wokuchaneka kweematshini ze-cnc kunye namacandelo kubathengi kwihlabathi liphela. Iimveliso zisetyenziswa kwishishini lezonyango, icandelo lesemiconductor, ishishini loomatshini njalo njalo.
Sineqela lobuchwephesha lobuchwephesha kunye namagcisa anamava, ngawo onke amandla ethu kunye nehlombe, sigxile ekuboneleleni abathengi ngeemveliso ezinezakhono eziphezulu kunye nomgangatho ophezulu ukuze ube liqabane lakho elithembekileyo.
I-Dongguan Weldo Precision Machining Co, Ltd. ngumvelisi oqinisekisiweyo we-ISO 9001.
Isiseko semveliso kwigama elidumileyo ledolophu yaseDongguan. Inkampani yethu ineemitha zesikwere ezingaphezu kwe-6,000 zeendawo zeefektri, egxile kwiinkonzo zokuchaneka kwe-cnc kunye neenkonzo zebandla ze-OEM kunye ne-ODM.
Ngaba uyafuna ukuphakamisa imibuzo yakho malunga nathi?
Naziphi na iikhosi zethu ezinokukunceda wenze oku!
I-Dong Guan Weldo Precision Machining Co., ltd, engumenzi osebenza ngokukodwa kwiindawo zokuchola kunye namava okuvelisa kunye namava okuyila.
I-Western Union, iMali, iGram, i-Escrow okanye i-Paypal T / T, ukudluliselwa kwebhanki. (50% njengediphozithi emva kokuqinisekisa intlawulo, kunye ne-50% njengebhalansi ngaphambi kokuhambisa.
ImvelisoIimveliso zokudumisa ezaziwayo
Ukuchaneka okuphezulu kweCustom Cnc Machining Aluminium Parts Metal Machine Parts
Ukuchaneka ngokwezifiso-i-CNC-Icandelo-loomatshini-ukuCwangciswa-kwezinto zeAluminiyam
Inxalenye ye-CNC engenasici
Umatshini wokugaya-uMatshini-weBron-Machining-CNC-Lathe-Precision-Machining-Turning-Parts- (2)
Indawo yokuSebenza kweMveliso
Izixhobo zokuSebenza eziQhelekileyo
IindabaIimveliso zokudumisa ezaziwayo
Eyongezwayo umatshini isigqumathelo clutch electromagnetic pe yayo ...
Iimpawu zokusebenza kunye nomgaqo osebenzayo we-clutch ye-electromagnetic yokufikelela ...
Iimpawu kunye nethemba Precision Oomatshini Izahlulo Proce ...
Umatshini wokuchaneka ngokuchanekileyo uhlala usisinyanzelo sabasebenzi, uqoqosho olukhulu, kunye neetekhnoloji ...
Siyazi ukuba machining ngqo uneemfuno eziphezulu ngqo, ngqo machining uye goo ...
Iimpawu zokusebenza kunye nomgaqo osebenzayo we-clutch ye-electromagnetic yezixhobo zomatshini wemaski. I-clu yombane ...
Umzi mveliso wokuchaneka ngokuchanekileyo ubusoloko uyimbambano yabasebenzi, eyinkunzi enkulu, kunye netekhnoloji enomdla kakhulu. Umzi mveliso une t ephezulu ...
Siyazi ukuba machining ngqo uneemfuno eziphakamileyo ngqo, ngqo machining has ngqongqo elungileyo, ngqo eliphezulu imveliso, kunye accu ...
Emva kokuThengiswaIklasi yokuqala emva kwenkonzo yokuthengisa
Singumthengisi wemveliso othenjiweyo kule ndawo ngaphezulu kweminyaka eli-12, sizakhele igama elihle kumgangatho, kwinkonzo yabathengi kunye nokusebenzisa izixhobo zikarhulumente-zobugcisa
bonelela ngeenkonzo zokufakela iiseti ezipheleleyo zeemveliso